देशको आर्थिक विकासमा जैविक विविधताले खेल्ने भूमिका
देशमा गरिने उद्योग धन्दाको विकास, कृषि उत्पादनको वृद्धि, पशुपालनको विकास आदिले मानिसको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछन । यस्ता कार्यहरुमा जैविक बस्तुहरुको उपयोग गरिन्छ । मानिसहरुद्दारा सञ्चालित काष्ठ उद्योग, कपडा तथा कागज उद्योग, रङ्गरोगन उद्योग, आदिमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थहरु मुख्य गरी बनस्पतिजन्य जैविक विविधताबाट प्राप्त हुन्छ । यस्ता जैविक विविधताको निकासी व्यापार गरेर प्रशस्त आयआर्जन गर्न सकिन्छ । जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकेमा पर्यटन व्यवसाय चलाएर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । जैविक विविधताको संरक्षणमा वृद्धि गरी उपयोगी जैविक वस्तुहरु उत्पादन एवम् वितरण गर्न सकेमा प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । तसर्थ देशको आर्थिक विकासमा त्यस देशमा रहेका जैविक विविधताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।
3 Career News and Info असार १९, २०७४
4 नेपालको पहिलो यान्त्रिक पुल
6 विकास योजना भन्नाले के बुझिन्छ ?
8 साईबर आक्रमण भनेको के हो ?
9 Career News and Info चैत्र २०, २०७३